September 22, 2020 Dai 8, 2022 0
The Kudza Tarisa GS Pro iri chaizvo a Huawei Tarisa GT 2 nebhatiri rakakura kwazvo. Tichifunga nezve kubatana pakati pemhando mbiri idzi, izvi hazvisi zvakawanda zvekushamisa, asi iri kure neiyo "nyowani" smartwatch. Musiyano mukuru ndewekuti GS Pro ine chunky yekunze (yandinoda) uye bhatiri rakakura (iro randinoshuvira kufanirwa nerudo rwangu). Iyi ndiyo Honor Tarisa GS Pro ongororo.
Nezve iyi Honor Tarisa GS Pro ongororo: Ndanga ndakapfeka iyo GS Pro kwevhiki ikozvino, ndakabatirana kune vhezheni 10.1.1.610 yeHuawei Hutano app pane yekubatana kweBluetooth. Munguva yese ye Honor Watch GS Pro nguva yekuongorora, yanga ichimhanya software vhezheni 10.1.0.58.
Kudza Kutarisa GS Pro ongororo: Dhizaini
Se fan of chunky watches, ndinoda iyo GS Pro dhizaini. Bhatiri rakakura rinoreva kuti chonky boi, kunyangwe paruoko rwangu, asi kwete zvinosekesa kudaro. Kana iwe uchida mawachi akakura izvi zvinokodzera iwe zvakanaka, sezvazvinoita kwandiri. Kana iwe wakambove wakangwarira nezve yakawanda yemazhinji smartwatches munguva yakapfuura, yambiro: iyo Honor Tarisa GS Pro haisi yevanopera moyo.
Ini ndinoda chunky wachi, asi yambiro: iyo Honor Tarisa GS Pro haisi yevanopera moyo.
Dhizaini yacho inondiyeuchidza nezve Casio ProTrek wachi yandakave neyangu uye yandinoda kwemakore. Mabhii maviri mahombe akapfava kurudyi-ruoko, angular makumbo, diver yekucheresa bezel: zvese zviri padanho. Iyo bezel yesimbi isina tsvina haina kutenderera, asi iyo "yekunze wachi" dhizaini yakanaka nzvimbo.
Iyo Honor Tarisa GS Pro inoratidza iyo Huawei TruSeen 3.5 setup kumashure, zvichireva iyo quad-sensor dhizaini nema LEDs uye vanogamuchira ekuverenga moyo-chiyero chiyero uye SpO2. Iwe zvakare uchawana maviri pogo pini yekuchaja uye mutauri, iyo nekutenda haina kumonerwa newrist yako kunyangwe iri panzvimbo yayo kumashure kweiyo wachi. Iko hakuna NFC.
Iyo inosanganisirwa fluoro yerabhani tambo pane iyo Charcoal Nhema unit yandinayo ine yakagadziriswa manzwiro kwazviri. Yakaomarara pamakumbo apo inosangana ne puck nepini-yakatakura 22mm pini, asi nekuti chassis yekurinda yakakura kwazvo hauone kuomarara sezvo ichimonera ruoko rwako.
Iyo Marl White vhezheni inouya netambo imwechete mune yeyeruvara ruvara asi iyo Camo Bhuruu sarudzo ine yakarukwa nylon tambo pane. Haisi yandinoda smartwatch tambo asi iyo yakarongedzwa inonzwika inoenderana neye matte kupera kwechikamu chikuru chepurasitiki chemuviri wewatch zvakanaka.
Hupenyu hwemazuva makumi maviri-maviri?
Musiyano mukuru pakati peRukudzo Tarisa GS Pro uye iyo Huawei Tarisa GT 2 hupenyu hwebhatiri (kana iwe uchinetseka kuti sei ndisiri kuzvienzanisa neiyo Kukudza Mashiripiti Kutarira 2 pachinzvimbo ndechekuti wachi iyoyo haina GPS nepo iyo GT 2 iine uye ivo vanonyanya kufanana neimwe nzira).
Iko Watch Watch 2 nhevedzano inopa mazuva gumi nemana ehupenyu hwebhatiri kuburikidza ne14mAh sero, iyo yakawedzerwa bhatiri yakawanda yeiyo GS Pro jacks iyo inosvika kune inoshamisa mazuva makumi maviri nemashanu. Sezviri pachena. Pamwe. Kwete Zvino.
Nezvandingafunge sekushandisa zvakajairwa, ndiri munzira kwemazuva gumi nemashanu ehupenyu hwebhatiri, kwete makumi maviri neshanu.
Iyo Honor Tarisa GS Pro ine 790mAh bhatiri, inobhadhariswa neanozivikanwa pogo pini puck mukati angangoita maawa maviri. Mumazuva matanhatu akazara kubva pandakabhadharisa kwekupedzisira, iyo Pro Pro bhatiri iri pa60%. Ini zvechokwadi handifunge kuti zvine musoro kutarisira kuzara kwemazuva makumi maviri nemashanu kubva mubhadharo imwechete - zvirinani kwete neiyo yazvino software vhezheni - asi ichave iri pakati pemavhiki maviri kana matatu.
Kudza kunoti iyo GS Pro inogona kugara kwemaawa zana neGPS yakagoneswa musimba-yekuponesa maitiro. Iyi sarudzo yezviitiko zvitatu chete: kukwira, kukwira makomo, uye nzira yekumhanya (tinya maseturu icon padhuze nebasa rega rega kuti uchinje iyo GPS modhi). Iyo GS Pro's default mode yemabasa ese mashandiro maitiro, ayo Honor anoti anokuwanisa iwe maawa makumi mana eakanyanya kurongeka kweGPS.
Munguva yeRukudzo Tarisa GS Pro nguva yekuongorora, ini ndaipfeka seyangu huru wachi ine nguva dzose-pazviso zvekutarisa zvakaremara (sezvo izvi zvinowanzo gura hupenyu hwebhatiri). Ini ndaive neTruSleep, inoenderera pamoyo-chiyero chekutarisa, uye otomatiki kushungurudzika kuteedzera kwakabvumidzwa.
Kunze kwekushandisa kwese kutarisa nguva nemamiriro ekunze, kupindura kana kuramba mafoni, uye kutarisa kurova kwemoyo wangu kana nhanho dzekunetseka, iniwo ndakateedzera zviitiko zvinoverengeka. Izvi zvaisanganisira makiromita makumi mana kutasva bhasikoro, kumwe kukwira pakupera kwesvondo, maawa akati wandei ekayaking, mashoma-anoonekwa kufamba mukati mevhiki, uye kumwe kudzidziswa kwesimba.
Iniwo ndairidza mimhanzi yakachengetwa pawatch uye pafoni yangu asi kweinenge awa chete (hafu yakaridzwa kuburikidza nevatauri veGS Pro uye imwe hafu pamusoro pezeve dzeBluetooth). Chaizvoizvo, hapana chandaizofunga kunge chisiri pane zvakajairwa, saka ndinonyatsozeza pamusoro pezvirevo zvemazuva makumi maviri neshanu zviri kuitwa. Parizvino, ndiri munzira kwemazuva gumi nemashanu, kwete makumi maviri neshanu.
Ini ndinofunga iwe ungangoda kunyatso kujeka kushandiswa pasina chiitiko chekunze kurova iro rakakosha danho, iro risingaratidzike serakanaka kune wachi yakanangwa yakanangana nemhando dzekunze. Izvi zvinoodza moyo zvishoma pa wachi ine bhatiri re790mAh. Nyaya iripo: mamwe maHuawei anotarisa ane 455mAh bhatiri zvakandichengetedza zvakachengetedzeka kwemavhiki maviri neakaenzana zviyero zvekutevera zviitiko.
Naizvo zvataurwa, ini ndakaonawo zvishoma-zvinoshamisira-kupfuura-zvinotarisirwa hupenyu hwebhatiri kubva ku Huawei Tarisa GT 2 Pro munguva pfupi yapfuura, saka panogona kunge paine software yazvino inogona kumakwa kuti inatsiridze mamiriro ebhatiri mumidziyo miviri. Kana zvinhu zvikachinja kuita zvirinani, ini ndichagadzirisa ino ongororo.
Lite OS uye Huawei Hutano
Lite OS iri nyore nyore kupfeka OS. Pachiso chekutarisa pamba iwe unogona kutsvaira kumusoro kuti uone zviziviso uye wozvibata kuti uwedzere (asi kwete kupindura). Kutsvaira pasi pachiratidziro chikuru kunoratidzira ako ekukurumidza marongero. Izvi zvinosanganisira kushandura kwekusavhiringidza, screen-on toggle, tsvaga yangu foni, alarm nzira, uye marongero emenyu mapfupi. Iwe zvakare uchawana yeBluetooth yekubatanidza icon, zuva, uye bhatiri chiratidzo.
Lite OS iri nyore nyore kupfeka OS. Ndinoifarira, asi haisi yemunhu wese.
Kusvetuka yakatwasuka kuburikidza neWatch GS Pro huru skrini inoratidza zviyero zvakatsaurirwa kuongororwa kwemoyo, kushushikana kwenzvimbo yekutevera, mamiriro ekunze, kutamba kwemimhanzi, uye dhibhodhi yechiitiko. Iyo dhibhodhi inoratidza zvindori zvitatu zvinoratidza danho rekuverenga, yakateedzerwa maminetsi ekudzidzira, uye maawa anoshanda ezuva racho. Iwe unogona kugadzirisa patsva Lite OS kumba skrini kana kuwedzera zvimwe nekuenda kuZvirongwa> Ratidza> Favorites (iyo chete iwe yaunogona kuwedzera pane iyo GS Pro Kurara).
Bhatani repamusoro kurudyi rinotangisa runyorwa rwako rweapp kana uchimanikidzwa pachiso chikuru chewachi. Zvinokutora kuti udzokere kuchiratidziro chikuru kana uchimanikidzwa kumwe kune iyo Lite OS interface. Kuti udzokere nhanho, ingo tsvaira mukati kubva kuruboshwe-kurudyi rwechidzitiro. Bhatani repazasi rinogona kuiswa kune chero nzira pfupi yekushandisa yaunoda asi inokanganisa kutanga chiitiko chekutevera.
Iwo maapplication ari paWatch GS Pro nguva nenguva anopa ruzivo rwakawanda kupfuura avo vanobatanidzwa makuru skrini. Semuenzaniso, Zvekuita Rekodhi zvinoratidza dashibhodhi rataurwa pamusoro, asi iwe unogona kusvetuka kumusoro kuti uone rumwe ruzivo rwakadzama kusanganisira macalorie akapiswa, kureba kwakavharwa, kukwidziridzwa shanduko, pamwe ne totali yezuva nezuva yematanho, maminetsi ekudzidzira, uye maawa anoshanda kwevhiki.
Huawei Hutano inopa iro rakadzama padanho rehuwandu. Iwe unogona kuchera chaiko mune yako Workout stats, tsika dzekurara, kushushikana mazinga, uye SpO2 zviyero, kana kutarisa yako uremu, kurova kwemoyo, uye macalorie akapiswa neawa, zuva, vhiki, kana mwedzi. Zvichida haina kumbofambira mberi semamwe maapplication anogona kupfeka asi ichiri neinopfuura data rakaringana rekufukidza mabhesiki.
Iwe unogona kuwedzera kuenda kumwedzi karenda kutenderera kuHuawei Health's dashboard nekukanya bhatani reHedhi pazasi kwechinyorwa chikuru uye uchiigonesa.
Kudza Tarisa GS Pro: Kutsigira kwehutano
Kunge mamwe ese Honor neHuawei anotarisa achimhanya Lite OS, zvinokanganisa zveiyo ecosystem (kureva yakakosha diki yechitatu-bato app rutsigiro) ichave dambudziko kune vamwe, kunyanya kana iwe watove wakasungirirwa mune yekusimbisa app senge Strava. Iwe unogona, zvakadaro, kugovana data kubva kuHuawei Hutano kuenda kuGoogle Fit kana MyFitnessPal, zvinoenderana nedunhu rako.
Izvo zvekutevera zviitiko zvekutevera pane iyo Honor Tarisa GS Pro zvakazara kwazvo.
Rutsigiro rweApple zvisinei, izvo zvekutevera zviitiko zvekutevera pane iyo Honor Tarisa GS Pro yakazara kwazvo. 100 modes inovhara zvese kubva kumhanya kwakawanda, kufamba, kushambira, uye mabhasikoro modhi, kune triathlon, simba, kutsika muchikepe, kukwasva, uye elliptical. Kune zvekare gumi nematanhatu ekumhanya makosi kana iwe uchida imwe yekuwedzera kukurudzira.
Kana zviitiko zvako zvemuviri zviri zvishoma niche, iwe une marudzi ese ezvekuwedzera zvinosanganisira dhanzi yemumugwagwa, HIIT, yoga uye pilates, tsiva uye taekwondo, tai chi, frisbee, laser tag, hove, kupeta, kuita parachuti, uye… zvakanaka, iwe unowana iyo poindi.
Kutevera kweHuawei kusimba kwakanyanya kunaka uye iyo Honor Watch GS Pro inoburitsa mhedzisiro yakafanana. Chiyero chemwoyo uye kushushikana pamidziyo zviripedyo zvakafanana (ndanga ndichipfeka iyo GT 2 Pro panguva imwechete sekutonga), sezvakaita marekodhi ekurara.
Imwe mutsauko yakakosha kutaurwa nhanho kuverenga. Ndakaona mukati meiyi Honor Tarisa GS Pro ongororo kuti inogara ichiteedzera mamwe matanho mukati mezuva kupfuura iyo GT 2 Pro. Ini handigone kuve nechokwadi kuti ndechipi chishandiso chiri kurondedzera zvisirizvo, asi panguva yeGT 2 Pro ongororo yakashuma yakaenzana kuverenga senge Huawei Tarisa Fit Ini ndaive ndakapfekawo panguva iyoyo. Saka chero iyo GS Pro iri pamusoro-kuburitsa kana ese ari maviri matsva mawadhi eHuawei ari pasi-kushuma.
Beyond moyo rate yekutevera uye kugwinya, iyo Pro Pro inopa yekurara yekutevera, izvo zvakanaka. Kunyangwe iwe usinga nyatso kuziva zvekuita neakarara maonero akapihwa, irwo ruzivo runonakidza kuve uripo. Kunyanya kana iwe uchida kuyedza uye kudzoreredza mainjiniya mamiriro aunowana zororo rakanakisa rehusiku.
Iyo Honor Tarisa GS Pro zvakare inopa pane-inoda SpO2 yekutarisa. Mhedzisiro yacho inogara ichiita kunge iri pa97% yekuzadza kana pamusoro uye inodonha nepesenti kana maviri chinguva mushure mekunge kuverenga kwauya, saka handigone kutaura kuti vakavimbika zvakadii. Iko kushomeka kwe24 / 7 yekutarisa yekuona yekurara kufema kunongova bummer, kunyanya neiyo yekuwedzera bhatiri kugona inowanikwa kuibata. ' newest software shanduro. Zvichida iri kuuya mune yekuvandudza.)
Kune barometer, altimeter, uye kambasi pane iyo Pro Pro. Izvi zvinouya zvinobatsira kana iwe uri mune yakakura kunze. Iyo GS Pro inonunura zvakanyanya mamiriro ekunze uye yakajeka mamiriro ekunze. Iwe unogona kuona paawa yemamiriro ekunze info yezuva razvino uye maonero ezuva nezuva evhiki riri pamberi. Iwe unogona zvakare kuwana nguva yemvura, mwedzi chikamu info, uye kuvira kwezuva / ruzivo rwekubuda kwezuva.
Nzira yekumashure yakanaka yakatsvinda uye chinhu chakanakisa kuve nacho.
Route Back is offline GPS Feature iyo inokutendera iwe kudzikisa foni yako uye uchiri kutsvaga nzira yako yekudzoka kana ukarasika. Inoshanda pakusarudza zviitiko zvekunze senge kufamba musango kana kumhanya kwekunze uye inopa nzira yakapusa yekutarisa kuti udzokere iwe kunzvimbo yako yekutanga. Ingo tsvaira kaviri kubva kumucheto kurudyi kwescreen (yapfuura mimhanzi inoridza) kana uchitsvaga chimwe chezviitiko zvinotsigirwa uye shandisa ma + uye - zviratidzo kuti usvitse mukati nekunze. Yakanaka kwazvo uye chinhu chakanakisa kuve nacho.
Sezvandambotaura pakutanga, ini ndiri zvese nezve iyi chunky aesthetic, saka ndiko kukunda kwandiri. Ndanga ndichigara ndichishandisa Huawei Hutano kwemakore saka ndinonyatsoda marongero uye nhanho yezvakadzama (Ini pachangu handidi yakawandisa data kubva kuwachi yangu, ingori Goldilocks huwandu, asi yako mileage inogona kusiyana). Ini ndinotenda Lite OS 'nyore zvakare. Zvakangodaro, ini ndinonyatsonzwisisa kuti hazvisi zvevanhu vese.
Ini ndinodawo ruzivo rwekuteerera paWatch GS Pro. Mutauri anowana zvinonzwika zvine ruzha uye nepo zvisingaite Dolby Atmos yakanaka darn yakanaka kune smartwatch. Iyo inokutendera iwe kuridza mimhanzi yakachengetwa pawachi yako kana pafoni yako kuburikidza neBluetooth 5.1 (iwe unogona zvakare kubatanidza mawadhi asina waya akananga akananga kuGS Pro - chimwe chezvinhu zvandinofarira). Iyo GS Pro inogona zvakare kugamuchira mafoni sekureba sekunge yakabatanidzwa kune yako foni.
Kana iwe uine Honor kana foni yeHuawei unogona kushandisa iyo GS Pro senge iri kure shutter yekutora mifananidzo. Saka ingo tsigira foni yako kumusoro, pinda pamberi payo uye shandisa wachi yako kumutsa shutter, nemasekondi mashoma kunonoka kana uchiida. Ichi chiitiko hachiwanikwe paPhones kana asiri-Rukudzo / Huawei mafoni efoni Vashandisi veIOS havagone kutora mukana wekunetseka kwekutarisa chinhu kana.
Izvo zvisiri-zvakanyanya-zvikuru zvinhu
Kunze kweinoshushikana hupenyu hwebhatiri uye kwete-yakanyanya-kukwikwidza mutengo tag, yangu chete mamwe chaiwo magrapeti mashoma mashoma Hardware uye software nyaya. Nehurombo, pakanga paine anopfuura akati wandei panguva yeRukudzo GS Pro ongororo yenguva, izvo zvakandisiya ndichinzwa kuti ichiri chidiki chakanyanya ngoro yenguva yekuratidzira. Handikwanise kuti munhu wese achasangana nematambudziko akafanana neni, asi heano mashoma andakawana:
Workout auto-yekucheresa yakashanda pamwe kota yenguva uye kazhinji yairohwa munzira kunonoka (semuenzaniso, maminetsi gumi nemashanu mukufamba kwemaminetsi makumi maviri). Ini zvakare ndakashambira pamakumi gumi nemaviri emidziyo mudziva pane imwe nguva uye iyo GS Pro yakatadza kuona chero chiitiko. Iyo GS Pro ine 15ATM kushorwa kwemvura nenzira.
Pese pandino tarisa kurovedzwa kwerudzi rupi zvarwo, iyo GS Pro yaigara ichitarisa kurova kwemoyo wangu kuve munzvimbo yakanyanyisa, kunyangwe paine nzvimbo dzakakodzera dziri kuiswa muapp. Izvi zvakaitika zvisinei nekuti ndaive ndichivhara-chipfuva pabhasikoro muna 175bpm kana kuita simba rakapfava kurovedza pa120bpm. Izvi zvakabva zvabata ma analytics andakawana kune yega yega yekurovedza muviri, skewing zvabuda zvangu.
Iyo GS Pro ine yakafanana laggy mhinduro zvese Honor uye Huawei zvishandiso neKirin A1 chip inoita kunge inotambura. Iyo lag pakati pekutsvaira kana kubata uye wachi ichinyoresa iyo dzimwe nguva inogona kunge yakaipa zvekuti iwe ungafunge kuti hauna kubaya chidzitiro. Paunoenda kuti uzviite zvakare, iyo GS Pro inozopedzisira yaita, ichikonzera kuti utore zvisirizvo-chinhu pane chinotevera skrini. Kupuruzira lag zvakare kwakashata, sezvakaita bhatani-pinda nguva yekupindura.
Kudza Tarisa GS Pro specs
Kudza Tarisa GS Pro
kuratidza 1.39-inch AMOLED inobata skrini
Resolution 454 × 454, 326 ppi
CPU / Ndangariro / chengetedzo Kirin A1, 4GB ROM (2GB iripo), 32MB RAM
Battery chinzvimbo 790 mAh (mazuva makumi maviri neshanu.)
Pogo pini kuchaja
Optical yemoyo yekushaya sensor
kugarisana Android 5.0+ uye iOS 9.0+
Kuyera uye kuyerwa 48mm X 48mm X 13.6mm
45.5g (isina 22mm tambo)
zvinhu Muviri: Yakasimbiswa polycarbonate
Bezel nemabhatani: Simbi isina simbi
Bhandi: fluoro rabha / rakarukwa nylon (Camo Bhuruu chete)
mavara Makara Matema, Marl Muchena, Camo Bhuruu
Kukosha kwemari uye kukwikwidza
Apa ndipo pane zvinhu zvinonamira zvishoma. Iyo Honor Tarisa GS Pro inotengesa ne € 249.90 muEurope munyika dzinosanganisira Furanzi, Jerimani, Itari, uye Speini. Spain neItari zvine dhisikaundi yekupihwa € 199.90 kusvika kupera kwemwedzi, kutumira muvhiki yekupedzisira yaGunyana.
MuUK, iyo GS Pro inodhura ₤ 249.99 uye yakanyorwa pamutengo iwoyo pa Kudza webhusaiti nesarudzo yako yemahara mahara maFreeBuds 3i, Kudza Makaralı maEarifoni, kana Honor Router 3, asi iyo yemahara inoshanda chete kusvika Gunyana 30, 2020.
Zvakaoma kutaura kuti Honor Tarisa GS Pro inopa yakanyanya kunaka kukosha kwemari kunyangwe mukati meRukudzo-Huawei ecosystem.
Zvakaoma kutaura kuti Honor Tarisa GS Pro inopa yakanyanya kunaka kukosha kwemari kunyangwe mukati meRukudzo-Huawei ecosystem. Kune mamwe akati wandei Ekuremekedza uye neHuawei anotarisa ane zvimiro zvakafanana uye maficha - kana isiri iyo imwecheteyo bhatiri kugona - kune zvakati wandei. Dai iyo yemazuva makumi maviri-maviri hupenyu hwebhatiri hwaive huripo hunogona kunge hwakakosha iyo yekuwedzera mari, asi haisi, uye haizi.
Iwe parizvino unogona kutora iyo 46mm Kudza Mashiripiti Tarisa 2 ye € 159.90/.139.99 XNUMX kana iyo Huawei Tarisa GT 2 ye € 179.99/£ 169.99. Nepo ese ari maviri mawachi akabuda mukupera kwa2019, iwo akafanana chaizvo. Musiyano chete ndewekuti Magic Watch 2 haina GPS. Munguva pfupi yapfuura, iyo Huawei Tarisa GT 2e inopa yakafanana package (minus speaker uye mamwe mabheti) e € 145/£ 140.
Sezvambotaurwa, mutsauko mukuru pano ndeye bhatiri reGS Pro ra790mAh, rinova iro basa hombe kana richinge rakashandurwa kuita hupenyu hwebhatiri huri nani. Kana chikumbiro chemazuva makumi maviri neshanu chakatsigirwa chingave chakakosha mari yekuwedzera, asi handizvo, uye hazvisi.
Read more: Huawei Tarisa GT 2e wongororo
Kunze kweLite OS, une zvakawanda zveimwe sarudzo yemakwikwi zvakare. Iyo 44mm Samsung Galaxy Watch Inoshanda 2 parizvino iri kutengeswa chete € 202.57/.206.96 XNUMX kuburikidza neAmazon. Iyo inopa iyo yakapesana dhizaini dhizaini dhizaini kune iyo Pro Pro uye hapana nzvimbo padyo neiyo bhatiri hupenyu, asi iri yakazara-inoratidzwa-yakazara smartwatch nerutsigiro rwekusasangana nemubhadharo uye zvimwe zvechitatu-bato app rutsigiro. Kana GPS yakakosha kwauri, isu zvakare tine yakazara runyorwa rweiyo akanakisa GPS smartwatches zviripo.
Kudza Tarisa GS Pro ongororo: Mutongo
Iyo yakareba uye ipfupi pairi ndeyekuti Honor anogona kunge akawedzera zvishoma iyo GS Pro. Izvi zvaisazove zvakashata dai zvainge zvisina kutadza zvakare kuburitsa pane yayo yepamoyo vimbiso ye25-yemazuva bhatiri hupenyu (kana kunyangwe mavhiki maviri ehupenyu bhatiri kana iwe uri chaizvo kunze kunze kwakawanda).
Iine software yekugadzirisa kugadzirisa mabugs uye hupenyu hwebhatiri nyaya, iyo Pro Pro inogona kunge ichiri chibvumirano chakanaka. Zvakamira izvozvi hazvo, ndinofunga ungangodaro uri nani neWatch GT 2. Kana iyo GT 2e kana iwe usingade mutauri. Kana tora iyo Galaxy Watch 2 kana iwe uchida zvimwe maficha uye unogona kurarama pasina iyo chunk. Iwe unowana chirevo changu.
Iine software yekugadzirisa kugadzirisa mabugs uye hupenyu hwebhatiri nyaya, iyo Pro Pro inogona kunge ichiri chibvumirano chakanaka.
Kana zvinhu zvikachinja kuita zvirinani ndichagadzirisa iyi Honor Watch GS Pro ongororo (ndatumira zvese zvichemo izvi kuna Honor kuti vaone kana pane zvavari kuita nezvazvo). Asi ikozvino, iwe unogona kuwana akaenzana mawatch kumwe kunhu pamutengo wakafanana uyo zvakare wakavimbika.
Mazuva makumi maviri nemaviri bhatiri hupenyu. Kuramba kunozivikanwa muzvikamu gumi nezvina zvinoenderana neMIL-STD-25G GJB. GPS Nzira Yekudzoka Navigation.
€ 249.90 paKudza
$ 249.99 kuRukudzo
$ 249.99 kuAmazon